တရုတ်နိုင်ငံရှင်းကျန်းဒေသတွင် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ကာ ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ‌ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံရှင်းကျန်းဒေသတွင် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ကာ ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ‌
ဝူးလူမုချီ၊ ဇူလိုင် ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်းဝေဂါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသည် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသည့်ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခြားဒေသများသို့ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၅၉ ဘီလီယံကို လွှဲပြောင်းပို့လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ရာ နှစ်အလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်း ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိခဲ့သည့်အပြင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလျှပ်စစ်စွမ်းအင်များကြောင့် ကျောက်မီးသွေးသုံးစွဲမှု တန်ချိန်ပေါင်း ၁၈.၀၂ သန်းကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု တန်ချိန် ၄၈.၆၇သန်း၊ ၁၅၃,၀၀၀သန်းနှင့် ၁၃၃,၀၀၀ သန်း အသီးသီးလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း ၅၉ ဘီလီယံ ထွက်ရှိခဲ့သည့်အနက် ကီလိုဝပ်နာရီပေါင်း၁၇.၅ ဘီလီယံ (သို့မဟုတ်) ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်မှာ လေစွမ်းအင်နှင့်နေစွမ်းအင်တို့မှ အဓိကရရှိသည့် စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်များဖြစ်ကြကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Green energy of Xinjiang boosts China’s carbon neutrality
URUMQI, July 12 (Xinhua) — Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region,aregion rich in energy resources, transmitted over 59 billion kilowatt-hours (kWh) of locally generated electricity to other parts of China in the first half of the year, up 34 percent year on year, helping to reduce carbon emissions nationwide.
The electricity helped these regions reduce the use of standard coal by 18.02 million tons, and emissions of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide by 48.67 million tons, 153,000 tons and 133,000 tons, respectively.
Meanwhile, of the 59 billion kWh of electricity generated, 17.5 billion kWh, or 30 percent, are from green energy sources, mainly wind and solar power.
တရုတ်နိုင်ငံ၏‌ရေခဲခွဲ သုတေသနယာဉ် အာတိတ်ဒေသလေ့လာရေးခရီးစဉ်စတင်ထွက်ခွါ
Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နောက်ထပ်တစ်သုတ် အင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိ